Tsy afa- bela ny SBC : Tompondaka ny Dream Team
Teo amin’ny amin’ny ampahefa- potoana voalohany ihany no nitarika ny SBC, Vakinakaratra, nanoloana ny Dream Team, Analamanga, tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina, ny sabotsy teo.
Ny halavana no tombony ho azy ireo ka nahatonga azy ho tompondakan’i Madagasikara N1B basket ball. Isa 79 no ho 75 no nisarahan’ny roa tonta. Ekipa vao nisondrotra nefa nanao pao- droa ny Dream Team, izay sady tompondakan’ Analamanga no tompondakam- pirenena 2010 tamin’ity sokajy ity. Lavon’izy ireo tamin’ny isa 64 no ho 55 teo amin’ny lalaom- bondrona ny SBC, teo amin’ny andro faha dimy. Mbola i Claudio Rajaonarivony, izay laharana faha 15 Dream Team ity ihany koa, no voahosotra ho mpilalao mendrika. I Heritiana Randrianasolo na i Jet Lee (laharana faha 7) avy ao amin’ny SBC Antsirabe kosa no mpilalao nampidi- baolina betsaka indrindra izay nahatratra 169. Ny Shooting Star, Toamasina kosa no nitana ny laharana fahatelo, rehefa nanilika ny CAF tamin’ny isa 78 no ho 65.